Muchina Zvikamu Kugadzirisa - K-Tek Machining Co, Ltd.
K-Tek Machining Co, Ltd. yakavambwa muna 2007, iri muDongguan, China, iyo "guta guru rekugadzira pasirese", rakafukidza nzvimbo inopfuura zviuru makumi maviri emamirimita, yakanangana nemazvo muchina zvikamu zvekugadzirisa uye yapfuura iyo ISO9001 : 2015 mhando manejimendi manejimendi sisitimu.
K-Tek Machining inopa OEM / ODM masevhisi, isu tinokwanisa kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, zvemagetsi, zvemotokari, zvekurapa, simba nyowani uye mimwe minda. Kuti tione hunhu hunodiwa hwevatengi vedu, isu takapinza epamberi yekugadzirisa michina uye yekuyedza michina senge Mashanu-akabatana Mashini (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Yemukati / Yekunze Grinder, Laser Kucheka, 3D CMM, Kureba Gauge uye Chinyorwa Kuongorora nezvimwewo kubva kuGerman, Japan, Switzerland neUnited States. Iyo kambani ine yakakwana chaiyo yekugadzirisa michina uye yakasimba yemhando manejimendi manejimendi system, mhando yezvakanaka zvikamu inogona kusangana neepasirese indasitiri zviyero, zvigadzirwa zvinotengeswa mhiri kwemakungwa.
Zvinhu zvedu zvakajairika isimbi isina chinhu, aruminiyamu, mhangura, yakaderera kabhoni simbi, mapurasitiki enjiniya uye mamwe marudzi esimbi yesimbi. Tinogona zvakare kupa kupisa kurapwa uye kwakasiyana kwepamusoro kurapwa kwevatengi: kupukuta, anodizing, galvanizing, nickel yakanamirwa pamifananidzo, sirivheri yakanamirwa pamoto, passivation, hupfu kupurudzira, nezvimwe
• Zvishandiso: (3 & 4 & 5) axis cnc Machining, Zvakajairwa michina, WEDM-LS, Mirror EDM, Yemukati / Yekunze Grinder, Laser Kucheka, 3D CMM, Kureba Gauge uye Chinyorwa Kuongorora nezvimwe.
• Kuzadza huwandu hwenongedzo, zvibvumirano zvekupa kwenguva yakareba.